Zvimwe zvikonzero zvekukurudzira Manjaro Linux 18.1 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo FreeOffice hofisi suite inoenderana neMIcrosoft Hofisi.
Pane zvikonzero zvakawanda zvekurumbidza Manjaro Linux. Ehezve, hapana anosarudzika kune uku kugovera. Zvinogona zvakare kuve kuti isu tinokoshesa zvakasiyana, saka ini ndinojekesa kuti runyorwa urwu nderwega uye kuti iwe unofanira kuzviedza zvakafanana, kunyangwe usingawirirane neni. Chokwadi icho iwe unozowana zvako zvikonzero pKuti uone kuti chiitiko chakakosha.
1 Zvikonzero zvangu zvekurumbidza Manjaro 18.1
1.1 Izvo hazvina kuvakwa paDebian kana Fedora
1.2 Tsigiro yevanotyaira kunze kwebhokisi
1.6 Dzakati wandei sarudzo dzaungasarudza kubva.
1.6.1 Shanduro dzepamutemo
1.6.2 Nharaunda dzemunharaunda
2 Uye pachave nezvimwe zvikonzero zvekuyedza Manjaro
Zvikonzero zvangu zvekurumbidza Manjaro 18.1
Izvo hazvina kuvakwa paDebian kana Fedora
Ini ndinotanga nekujekesa kuti handina chandinopesana naDebian kana Fedora. Ini ndinongofunga kuti kuwanda kwakawanda kuripo, ndipo patino pfuma tese.
Manjaro yakavakirwa paArch Linux, kugoverwa kwenharaunda nemidziyo yayo yekuisa mapakeji uye ayo ekuchengetera. Iyo ndeimwe yeanokurumidza kwazvo kuisa mavhezheni ezvazvino epurogiramu anozivikanwa kwazvo akavhurwa sosi.
Chinhu chine Arch Linux ndechekuti inoitirwa kuti igadziriswe zvakanyanya, izvo zvinoda mushandisi akasimba kubatanidzwa mune yekumisikidza maitiro. Manjaro anogadzirisa izvi kwatiri otomatiki akawanda maitiro.
Tsigiro yevanotyaira kunze kwebhokisi
Kunyangwe paine zvakawanda zvekugovera zvinokutendera iwe kumisikidza yevanotyaira madhiraivha, pane mashoma ayo anorega iwe uashandise muRarama mode. MuManjaro iwe unongofanirwa kusarudza sarudzo mune yekutanga menyu.
Calamares haizi chete inosimudzira iyo Manjaro inoshandisa, iwe unogona zvakare kuiwana mune kumwe kumwe kugovera. Kusiyana naAnaconda, iye asingakwanise Fedora simaki, haufanire kuenda kunotsvaga mabhatani kwese chidzitiro, kana kuita kosi kuNASA kugadzira chikamu.
Ubiquity, iyo Ubuntu yekumisikidza, ingori nyore. Kunyangwe ichiratidza dambudziko, kumisikidza kwakapetwa kungangoda kuti Windows partition isadzikiswe uye iiswe kakawanda kuitira kuti ishande. Mupfungwa iyoyo, Calamares haana kumboburitsa chero kusagadzikana.
Kuva kugovera kunobva kuArch Linux, Manjaro ine zvinyorwa zvitsva zviripo ezvirongwa, zvakapfuura kupfuura kumwe kugovera. Asi, kuona kuti hapana matambudziko anoitika, mamaneja avo anovaedza kare kuti uvawedzere kune ako ezvinyorwa.
Zvisinei, kana iwe uchida kutora mukana, iwe unogona kuisa zvirongwa uchishandisa iyo AUR repositories. Aya ndiwo marekodhi akagadzirwa nevechitatu mapato ekuisa mapakeji ayo asina kutanga akaiswa kune Arch Linux
Kana iwe uri kutsvaga yepakati nzira, iyi nyowani vhezheni 18.1 inounza yemuno inotsigira Snap uye Flatpak. Sezvo mafomati ese ari maviri achisanganisira zvinoenderana nezvinodiwa pakuitwa kwechirongwa chimwe nechimwe, hazvikonzeri shanduko kune hwaro system.
Kune avo vedu vakatambura neOpenOffice mukati meZuva mazuva, kukura kweLibreOffice kunoshamisa. Uye, sekuona kwandinoona, kuenderana neMicrosoft Office kwakanaka. Nekudaro, panofanirwa kuve nedambudziko kumwe kunhu sezvo paine migove inosarudza kusanganisa dzimwe nzira dzakadai seWPS Hofisi kana kuisa mapfupi kune iyo online vhezheni yeMicrosoft Office.
Pfungwa yekutanga yeavo vane basa reManjaro yaive yekushandisa FreeOffice sehofisi suite. Asi, kumanikidzwa kubva kunharaunda yavo kwakavamanikidza kuisa mune inosimudza kugona kusarudza pakati peizvi neLibreOffice.
FreeOffice chigadzirwa chakanaka kwazvo chinovimbisa kuenderana nemafomati ese eMicrosoft Office. Iwe unogona zvakare kugadzira zvinyorwa mu pdf kana epub fomati.
Kunyangwe iwe uchida echinyakare interface kana iyo nyowani tepi interface, chirongwa ichi chinokutendera iwe kusarudza icho chinonyatsokodzera zvaunoda.
Dzakati wandei sarudzo dzaungasarudza kubva.
Takataura pamusoro apa kuti Arch Linux inogadziriswa kwazvo. Vagadziri uye nharaunda iri kumashure kweManjaro vanoshandisa izvi kuti vape dzakasiyana sarudzo dzakasarudzika. Panguva yekunyora iyi posvo, iwo aripo, kubva papeji rekurodha pasi, anotevera:
Uye pachave nezvimwe zvikonzero zvekuyedza Manjaro
Nhau dzataipa pakutanga kwesvondo kuti Manjaro yaizoshandura kuita mubatanidzwa uye panguva imwechete ichivimbisa mari kubva munharaunda ingangove nhau dzakanakisa dzegore. Iyo ndiyo modhi yakatungamira Red Hat kubudirira asi yakavandudzwa. Nharaunda haizovimbe nerutsigiro rwemari rwekambani yemubereki saka ivo vanozogona kuzvisarudzira vega.
Tichaona kana vakaita zvibvumirano nevamwe vanogadzira software senge iyo yavanayo naSoftmaker kana Hardware senge yavainayo neBlue Systems. Asi, ndinotsunga kuvimbisa kuti nguva dzinonakidza dziri kuuya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe zvikonzero zvekukurudzira Manjaro Linux 18.1
Chandinonyanya kufarira nezveManjaro ndechekuti hapana chakaipa, zvese zvinokurumidza, zvese zvinoshanda uye ndizvozvo.
Pindura kuna Osasuno
Ndakaenda kuManjaro "Anch yevanhu" kuti vaedze, sekune vamwe vazhinji uye ini ndakagara mairi. uye yatove kushanda nemazvo kudzamara Multisystem - makore mazhinji achipa matambudziko -.
Chikonzero changu chikuru ndechekuti inogadziridza nekukurumidza uye maAURs kwete maPPA.
Chinyorwa chakanaka kwazvo, asi ini ndinowedzera kuti ndiko kugovera kwazvino nemamwe edesktop edhisheni padhuze neUbuntu
rondedzero yenzvimbo dzemunharaunda dzakareba kupfuura izvo zvaunopa muchinyorwa:
uye kuvhurika kuburitsa vamwe vasina kuvandudzwa senge fluxbox
Kana iyo netbook edition
Ivo vachiri vanogona kuiswa.
Ini ndaizoratidzira kuti ndiyo ingangoita nzira chete yekunakidzwa nedesktop desktop pasina zvichienderana neyakavanzika Chinese kugovera uye kwayo inononoka zvinyorwa.
Ini ndinokuudza kuti nharaunda shanduro dzandataura ndidzo idzo dzatova mushanduro 18,1. Iwo mamwe achiri muna 18.04 Sezvavanobuda ini ndichavagadzirisa
Kuongorora kunyorwa kwechinyorwa ndinoona kuti hazvina kunyatsojeka
Manjaro ndiko chete kugovera uko KUSINA kundipa matambudziko. Ini ndaida chaizvo Antergos panguva iyoyo, asi yanga isina kugadzikana sezvayaifanira kuve. Kuve wepakati mushandisi mushandisi, ini ndoda kuisa uye kusunungura mapurogiramu nekukurumidza uye ini handina kuuya kuzonzwisisa iyo system yeDebian, Ubuntu uye kambani ppa's, ini ndinoiona ichinetsa uye isingashande zvakanyanya. Nezviri nyore sei kuvhura Octopi kana iyo terminal uye uine ese mapurogiramu aunoda mune akati wandei ekukanya. Ivo vane KDE yakatarirwa kune iyo max uye zvekutaura nezve kugona kwekuchinja kernels zviri nyore. Ini handifarire kuti nguva dzese padzinouya nezvakawanda uye zvisina zvirongwa zvemahara, asi kuvaburitsa zvakwana.
Inogona here kuiswa pane 32-bit komputa?
Iyo yekare vhezheni inowanikwa ye32-bit neiyo XFCE desktop https://manjaro.org/download/32bit-xfce/
Kuravira mavara. Ndanga ndichishandisa Linux (uye Windows) kubvira pavakazvarwa (ndinoziva, ave makore). Uye Manjaro KDE kubva pandakaiwana uye zvakaridza pfungwa dzangu. Asi ini ndakaneta nedzimwe nyaya (ine AUR uye mbiri bhutsu kunyanya) uye ndadzokera Kubuntu uko pasina mubvunzo kuri kugadzikana zvakanyanya (sekutaura kwangu mune yangu kesi). Uye nekuti ini ndinoda KDE. Uye kune dzimwe nzira dzakawanda dzakafanana.
Uye ini ndinoita chikumbiro chiri pachena. Ngatimbomira kutaura nezve Linux (kana Windows) uye tarisa pane izvo zvakakosha: zvinoshandiswa (zvemahara kana kwete, zvemahara kana kwete, asi zvakakosha). Izvi ndizvo zvinoshandiswa masisitimu anoshanda. Zvese zvimwe hazvife zvakatisvitsa chero kupi ... kana hongu: kuramba tichipokana. ;-)
Ini ndinobvumirana zvachose newe. Ndakaenda kubva kuUbuntu kuenda kuManjaro Cinnamon uye KDE. Kwakanaka kuita, zvisinei nekuda kwesoftware inodiwa, ini ndaifanira kudzokera Kubuntu. Chero bedzi ivo vachikundikana kukwezva mapurogramu kune avo ekurongedza, zvakaoma kuushandisa kune rehunyanzvi basa. Sesarudzo yekushandisa kwese pamba, kubhurawuza, kuteerera mimhanzi, nezvimwe. Zvakakwana.
Kugoverwa kwakanaka, ini ndaishandisa Antergos, asi yaive isina kugadzikana, saka ndanga ndichitsvaga sarudzo kusvikira ndaedza Manjaro, ndinayo ne KDE parizvino. Iyo yekudyidzana software inobviswa uye ndizvozvo.
Muchiitiko changu, Manjaro haana kumbobvira andishandira sezvazvaifanira, vazhinji vakati yakagadzikana uye ichikurumidza kune yakaderera-pfuma pc asi zvisinei chinhu chega chayakawana ndechekugara wakanamira nguva dzese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ini ndaishandisa iyo XFCE vhezheni iyo ine mamwe ma distros yakashanda nemazvo ... Ini ndaifanirwa kuisa linux mint XFCE uye inoshanda zvishamiso, chinhu chega chakanaka nezve Manjaro ndechekuti yakavakirwa paArch asi zvimwe zvacho hazvina kunaka sezvavanotaura.
Yakanaka kwazvo pakutanga, asi kurota kunopera kana Manjaro yakagadziridzwa:
Johnny swahn akadaro
Shanduro yeLSB: n / a
Tsanangudzo: Manjaro Linux
Pindura kuna Johnny Swahn
Hotel Magnate: gadzirisa hotera yako neiyi simulator